I-Sailthru: Lungiselela, Zenzekelayo kwaye uhambise | Martech Zone
I-Sailthru: Lungiselela, Zenzekelayo kwaye uhlangule
NgoLwesibini, nge-17 kaDisemba ngo-2013 NgoLwesibini, nge-17 kaDisemba ngo-2013 Douglas Karr
Singena kwiminyaka enomdla xa kufikwa kwidatha enkulu kunye nokwenza umntu. Amaqonga afana Sailthru unokwenza ubuqu bakho kunye nesihloko somyalezo owuthumelayo ngeselula okanye nge-imeyile- kwaye emva koko wenze umxholo wesiza umsebenzisi afike kuso. Kudala ndibhala ukuba umda wale mihla kubahlalutyi Kukuba kuphakamisa imibuzo emininzi, hayi iimpendulo ezizizo. Amaqonga okwenza ubuqu afana ne-Sailthru atshintsha iparadigm- ukuthatha idatha yohlalutyo kunye nokwenza ngcono amava endwendwe ukuze yonyuse ingeniso… kwaye ikwenza ngokuzenzekelayo ngokuthumela imiyalezo kunye newebhu.
Ngelixa obu buqu buvelisa amava aphezulu omsebenzisi kunye nokuguqulwa okuphezulu, ndinomdla wokukhangela kunye noluntu ekufumaneni. Ukuba ndinamava angawethu ... amathuba okuba uGooglebot akenzi njalo. Okanye ukuba ndibelana ngamava am, ngaba uya kufumana okufanayo? Mhlawumbi, okanye mhlawumbi hayi. Siza kubona… kodwa okwangoku, amaqonga okwenza ubuqu aqhuba uthethathethwano oluhle kunye notshintsho. Kubonakala ngathi usuku lweqonga lokuthengisa elimeyile lisemva kwethu!
Ngokuqhuba ukubandakanyeka okunzulu, amaqonga anje nge- Sailthru kufunyaniswe ukuba inyusa ingeniso iyonke. Nantsi indlela:
Unxibelelwano olufanelekileyo nolufike ngexesha elifanelekileyo -Isisombululo seSailthru Smart Strategies sikuvumela ukuba usete ubugcisa ukuthontsiza amaphulo ayilelwe ukubandakanya ngokuzenzekelayo abasebenzisi abadala, ukukhawulezisa ukuthengwa okuphindwayo, ukuphinda ulahle inqwelo, unikezele ngesilingo sasimahla, njl.
Umxholo owenzelwe wena kunye neengcebiso -I-Sailthru's technology proprietary tracks tracks site, imeyile, iselfowuni, ngaphandle kweintanethi kunye nokuziphatha kwezentlalo ukukhulisa iprofayili yomdla kulowo nalowo mthengi. Ukusuka apho, banokuzalisa ngokuzenzekelayo lonke unxibelelwano kunye nomxholo kunye neemveliso ezifanelekileyo.
Ukudlula kwesahlulo sentengiso ejolise ngakumbi Sebenzisa i-Sailthru ukwakha amandla, amaqela aphucukileyo omsebenzisi ngokusekwe kwidatha yokuziphatha ebanzi efumanekayo kumthengi ngamnye.
Ulawulo lwengeniso olunomdla nolusebenzayo Ingeniso esemgangathweni yeSailthru kunye nokujonga iphepha kweemetri kuxhobisa abathengisi kunye namaqela okuhlela / okhulisa ukuze baphucule imikhankaso yabo yokuthengisa kunye nokunyusa ngokusekwe kwiidola zokwenyani kunokuvula okanye ukucofa.
tags: i-automateKu hlangulayonyusa ingenisoUkulungiswanokwandisaNgokwezifisoyiseyama
Iimpazamo eziPhezulu zezeNtlalontle zika-2013
ITiger Pistol: Intengiso yamashishini amancinci yeFacebook